४९ वर्षमा भारतीय चर्चित नायक गोबिन्दाले नेपाली चेली सुनितासँग दोस्रो विबाह गरेको रहस्य यस्तो ! – Online Khabar 24
October 24, 2021 October 25, 2021 by admin admin
एजेन्सी । बलिउड चर्चित नायक गोबिन्दा आहुजा कुनै समय यति ब्यस्त थिए की उनलाई भेट्नका लागी लामो समय कुर्नु पथ्र्यो ।
गोबिन्दाले सन् २०१५ जनवरीमा श्रीमती सुनितासँग धुमधामका साथ विवाह गरे । जुन दोस्रो थियो ।
तर उनले आफ्नै श्रीमती सुनितासँग नै हो दोस्रो विबाह गरेको । आमाको इच्छा अनुसार गोबिन्दाले श्रीमतीसँग पुनर्विवाह गरेको हालैको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा रहस्य खोले ।कार्यक्रममा गोबिन्दाले श्रीमतीसँग दोस्रो विवाह गर्नुको कारण खुलाए । आमाको इच्छा अनुसार गोबिन्दाले श्रीमतीसँग पुनर्विवाह गरेको बताए ।
उनले भने, ‘आमाकै इच्छा अनुसार ४९ वर्षमा पुगेर दोस्रो विवाह गरेको हुँ । कुनै समयका सुपरस्टार गोबिन्दा ९० को दशकपछि कमेडी जनरालाई नयाँ उचाई दिन सफल नायक मानिन्छन् । फिल्म निर्माताले उनकै कारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुरु गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस ….के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस
काठमाडाै। को’रोना सं’क्रमणबाट सुरक्षित रहन मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सबैले बुझिसके। तर, मास्क कसरी लगाउने र कस्तो लगाउने भन्नेमा धेरैलाई अन्यौल नै देखिन्छ । सबभन्दा ठूलो अन्यौल त एन–९५ मास्क’ले ल्यायो।
कोरो’नाको पहिलो लहर सुरू हुँदा भल्भ भएको एन–९५ मास्क सुरक्षित हुन्छ भनेर धेरैले त्यस्तै लगाए। पछि त्यो मास्क को’रोना संक्र’मण रोक्न भरपर्दो मानिएन। त्यसले मास्क लगाउने व्यक्ति सुरक्षित रहे पनि ऊ संक्रमित छ भने अरूलाई सुरक्षा नगर्ने कुरा सार्वजनिक भयो। कतिपय व्यक्तिले भित्र सर्जिकल मास्क लगाएर बाहिर एन–९५ लगाएको पनि देखियो।
यिनै प्रश्न र जिज्ञासाबारे सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनूप सुवेदीले गत वर्ष सांसद गगन थापासँगको फेसबुक संवादमा जवाफ दिएका थिए। मास्कबारे उनीहरूबीचको सवाल-जवाफ कोरो’नाको दोस्रो लहरले गाँजेका बेला पुनः सान्दर्भिक देखिएको छ।
कोरो ना’ महा मारी नियन्त्रण गर्न आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि संक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने हुँदा यस्तो मास्क लगाउनु ‘सामाजिक रूपमा अनुत्तरदायी व्यवहार’ भएको डा. सुवेदीले बताए।
धुन नमिल्ने भए के आज लगाएको मास्क भोलि पनि लगाउन मिल्छ त? त्यो पनि मिल्दैन। यस्तो महा’मारीको समयमा मास्क लगाएर हिँड्दा त्यसको बाहिरी पत्रमा संक्रमित व्यक्तिको थुकको छिटा परेको छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। त्यहाँ को’रोना भाइ’रस हुन सक्छ भन्ने हामीले ख्याल राख्नुपर्छ।
मान्छेले आफूलाई लक्षण नदेखिएको भए पनि मास्क लगाउन किन जरूरी छ भनेर उनले चर्चा गरेका छन्। श्वासप्रश्वासका क्रममा मान्छेको नाक–मुखबाट निस्कने थुकका छिटाहरूबाटै यो भाइरस सर्ने हुँदा मास्क लगाउनु जरुरी भएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, अर्को मान्छेले खोकेको वा बोलेको बेला मु’खबाट निस्कने छि’टाबाट जोगिन मात्र मास्क लगाउने होइन। त्यसो गर्दा थोरै मान्छेले मात्र मास्क लगाउँछन्।
‘यसरी थोरै मान्छेले मात्र लगाउँदा सं’क्रमणको लक्षण नभएका मान्छे मास्क नलगाई हिँड्छन्। लक्षण नभएका मान्छेलाई आफू सं’क्रमित भएको थाहा हुँदैन। उसले सास फेर्दा निस्कने छिटाबाट अरूलाई रोग सर्छ। त्यसैले, मास्क सबैले लगाउनुपर्छ। आफूलाई सं’क्रमणको कुनै लक्षण छैन भने पनि मास्क लगाएर हिँड्ने बानीले यो रोग सर्न पाउँदैन,’ उनले भने।
सबैले सर्जिकल मास्क, एन–९५ मास्क वा दुई–तीन तहको कपडाको मास्क लगाएर हिँड्यौं र सही ढंगले लगायौं भने कोरो’ना भाइर’सको म’हामारी आफैं नियन्त्रण हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए।
उनले अगाडि भने, ‘मास्क लगाउनु भनेको आफू जोगिन मात्र होइन, अरूलाई जोगाउन पनि हो। आफूलाई खोकी लागिरहेको छ वा कुनै किसिमको रो’ग छ, तर मास्क लगाएको छैन भने अरूको निम्ति अभद्र वा गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।’
डा. सुवेदीको कुरा सुनेर तपाईंले पनि मास्क लगाउने तरिका थाहा पाउनुभयो होला? कतै तपाईंहरू पनि सर्जिकल मास्क वा एन–९५ मास्क धोएर त लाइरहनुभएको थिएन? वा, हरेक दिन एउटै मास्क लगा इरहनुभएको थियो कि? त्यसो गर्नुभएको थियो भने डा. सुवेदीको सुझाव अमल गर्नुस् है। (समय सान्दर्भिक भएका कारण सेतोपाटीबाट साभार गरिएकाे)
Prevबजाज मोटरसाइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो पढिहाल्नुस
nextएकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी एकै पटक बने ग’र्भवती !